Amathiphu wokuhlola: indlela yokugqoka owesifazane ngo-50 entwasahlobo nasehlobo 2016, isithombe
Imfashini yehlobo-ehlobo 2016 yabesifazane abangaphezu kuka-50, isithombe
Indlela yokugqoka abesifazane ama-50? I-stylish, nenhle futhi iyabiza! Phela, abesifazane abaneminyaka engu-50 banamabhungu aneminyaka engu-30 ubudala, abahlakaniphileyo futhi abahlakaniphile kuphela. Sinokuhlangenwe nakho kokuphila, futhi kubonga abaklami banamuhla, nethuba lokubheka amashumi eminyaka amancane. Ikusasa lentwasahlobo yisikhathi esihle sokulungiswa kwesigqoko sokugqoka, ngakho-ke sikunikeza ukubuka konke okufingqiwe kwezindlela ezihamba phambili zokugqoka abesifazane.
Imfashini yehlobo-ehlobo 2016 yabesifazane abangaphezu kuka-50
Imfashini yabesifazane abangaphezu kuka-50 ayifani kakhulu nemikhuba yamanje yamanje yokugqoka. Yiqiniso, abesifazane abavuthiwe badinga ukhethe isitayela esisha bese begwema izingubo ezingenasidingo ezingenasidingo. Phakathi kwalaba kumele kube le ntwasahlobo kanye nehlobo kuzoba ngamajazi, ama-ponchos, amabhuzu, amasitokisi kanye namabhuluki aqinile.
Isizini sonyaka we-2016 wabesifazane, abangaphezu kuka-50
Abesifazane abangaphezu kuka-50 kufanele bakhethe isitayela esifanelekile noma ukusika okwejwayelekile. Amamodeli wefashini azoba imibala ephuzi, isige, isihlabathi ne-burgundy. I-chic ekhethekile yengubo emhlophe emhlophe. Futhi, emva kwabesifazane abangama-50, izinhlobo ezinjalo zejazi, njenge-redingote ne-pardesu, yobude obuphakathi nobude bemvelo, zilungile.
Uma ukhetha ijazi lejazi, ke unake izibonelo zesikhumba. Yiqiniso, kufanelekile ukuthenga ijaji yangempela lesikhumba, uneminyaka leyo lapho udinga ukugcizelela ubuhle bakho ngezinto ezibizayo. Imodeli engcono kunazo zonke kwabesifazane emva kweminyaka engu-50 iyigqoke jacket-jacket. Akuyona into ebhekayo kanye nezinketho ze-zipper ezinamahlombe aphezulu kanye nebhande.
Intwasahlobo ezayo e-wardrobe yowesifazane ngamunye ovuthiwe kufanele avele suit suit noma okungenani amabhulukwe amancane. Lokhu kudala okuvamile, okuyinto ehlangene ne-smart blouse kuyoba yingubo ekahle kunoma yimuphi umcimbi. Amatholethi ancishisiwe aphezulu kuya phezulu. Abesifazane abangaphezu kuka-50 bangamamodeli afanelekayo asemnyama, ama-blue shades. Ungakhohlwa ngama-jeans. I-jeans emnyama eluhlaza okwesibhakabhaka ne-podvoroty, nayo, iphakathi kwentwasahlobo enkulu kanye nemikhuba yehlobo.
Ngokuqondene nezicathulo zefashini, izingane ezineminyaka engu-50 zingakwazi ukugqoka izinhlobonhlobo ezithinta kakhulu: amabhuzu, amasitokisi, izicathulo zakudala, izikhumba ze-ankle, ngisho nezikhumba (izinsimbi eziphansi noma izintambo eziphansi).
Imfashini yehlobo-ihlobo 2016 yabesifazane abaphelele abangama-50
Abesifazane abanembambano nabo bazosondelwa ngamabhuluki afudumele obude be-classical skirt. Ukuze uhambe emakhazeni asebuswazini asebusika, khetha i-cardigan ende ne-jeans ende.
Ungakhohlwa ngezesekeli ezibalulekile, ngaphandle kokuthi isithombe singabonakala singaphelele. Esigqokeni sekhwasahlobo sehlobo sasehlobo, abesifazane abangama-50 kufanele babe namagundane omzimba wesikhumba eside, isikhala esicacile, i-beret enamafutha noma ihembe elibanzi. Zonke lezi zinto zisebenza kakhulu ngenkathi ezayo, ngakho ngosizo lwabo uzobukeka behle futhi behlelekile.
Umlingo womoya namagagasi: iqoqo leManila Grace S / S 2016
Imfashini, isitayela, ubuhle, ubuhle
Izambatho zangaphansi zasebusika ezisezingeni eliphezulu ezingu-5-2017
Imfashini yabantu: i-hoodie - isenzo sekhanda-2016
Yiba engavamile ngeqoqo elisha lezingubo zabesifazane ezivela eBizzarro
Ubuhlakani obuhlakaniphile: iqoqo lonke lezinkathi ezifundweni
Ukuthenga nge-inthanethi nge-BIZZARRO
Ukukhetha iBhayisikili Lezingane
Imifino nezithelo ezinezivithamini A no-E
I-powder yokubhaka inhlama enezandla
Indlela yokunciphisa inqubo yokuguga futhi uhlale uncane
Kuyini ukukhishwa kwamakhemikhali? Impendulo ekuboneni ubuso
Isikhumba esomile, sishaya ezithende
Yini okufanele uyenze lapho ingane yakho ilele?
Umlando wendaba: ukukhwehlela okukhwehlela, ukutheleleka kwengane
Ungadliwa amaqebelengwane amnandi nama-pie
Izinkondlo Zosuku Lothisha ezivela kubafundi nabazali-ukuhalalisela amahle, amafushane futhi amahlaya
Ungabi kanjani isisulu se-pickpocket?
Ingabe indoda yami ifanele ubuhlobo obungathí sina